Valiny ara-pitsaboana momba ny CBD & Delta 8 THC
Fanontaniana sy valiny momba ny fitsaboana momba ny Delta 8 THC sy Delta 10 THC Avy amin'ny Internet
Inona ny Delta 8 THC?
Nosoratan'i Shishira Sreenivas
Nodinihin'i Neha Pathak, MD tamin'ny Jolay 08, 2021
Lahatsoratra navoaka voalohany https://www.webmd.com/mental-health/addiction/what-is-delta-8
Ato amin'ity lahatsoratra ity
Inona no mampitaha azy amin'ny Marijuana mahazatra (Delta-9-THC)?
Ara-dalàna ve ny Delta-8?
Aiza no ahitanao azy?
Azo antoka ve izany?
Hizaha toetra tsara amin'ny THC ve ianao?
Ny Delta-8 THC (na Delta-8-tetrahydrocannabinol) dia singa simika voajanahary voajanahary antsoina hoe cannabinoid izay hita amin'ny soritra kely amin'ny zavamaniry hemp sy rongony (marijuana). Mirongatra ny lazany, ary ahitanao azy na aiza na aiza manomboka amin'ny dispensaries ahidratsy ka hatrany amin'ny talantalana fivarotana.
Fa maninona no mitombo ny fangatahana Delta-8? Ho an'ny vao manomboka, ny firafitry ny simika dia mitovy amin'ny an'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC), ny fitambarana psychoactive lehibe hita ao amin'ny rongony. Izany no mahatonga anao ho “avo”.
Ny Delta-8 sy ny Delta-9 dia endrika THC. Fa rehefa miresaka THC ny olona dia matetika no ilazany ny Delta-9 izay hita ao anaty marijuana avo lenta. Samy mamoaka fahatsapana mampihetsi-po sy manjavozavo, fa ny Delta-8 kosa dia miteraka haavo malemy kokoa.
Raha ny marina, ny Delta-8 dia matetika antsoina hoe "marijuana-lite" na "tsimparifary sakafo." Ny voka-dratsin'ny THC mahazatra toy ny paranoia, ny tebiteby ary ny faharendremana dia tsy dia matanjaka loatra koa.
Ara-dalàna ve ny Delta 8 THC?
Antony iray hafa itomboan'ny lazan'ny Delta-8 dia satria, tsy toy ny THC voafehy be, ny Delta-8 dia ara-dalàna ampiasaina any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana. Izany dia satria ny ankamaroany dia nalaina avy tamin'ny CBD azo avy amin'ny hemp, izay ara-dalàna ny fiompiana manerana an'i Etazonia
Fa ny Delta-8 dia mipetraka amin'ny faritra volondavenona misy lalàna. Ny ara-dalàna an'i Hemp dia avy amin'ny nantsoina hoe volavolan-dalàna momba ny fambolena federaly (ny lalàna momba ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo amin'ny taona 2018), izay nanala ny hemp sy ny vokatra avy tao amin'ny lisitry ny akora voafehy. Ny antony: ny haavo THC ambany an'ny Hemp (latsaky ny 0.3%). Tsy miresaka momba ny Delta-8 na aiza na aiza io volavolan-dalàna io. Ireo mpisolo vava amin'ny hemp sy ny hafa izay mivarotra azy dia nampiasa io loofole io mba hivarotana ara-dalàna ny vokatra Delta-8, matetika tsy misy fetran'ny taona. Vokatr'izany dia izy io no vokatra haingana indrindra amin'ny indostrian'ny hemp. Azonao atao ny manamarina ny toerana ara-dalàna an'ny fanjakanao eto: https://redemperorcbd.com/is-delta-8-thc-legal-in-my-state/
Satria kely ny fanaraha-maso na fanandramana ataon'ny laboratoara momba ny vokatra Delta-8, manana olana ara-piarovana ny mpahay simia sy ny mpahay siansa hafa. Ny vokatra voamarika ho Delta-8 dia mety misy loto, ao anatin'izany ny THC avo lenta. Vokatr'izany, fanjakana am-polony eo ho eo, ao New York sy Co.
Azonao atao ny mividy Vokatra Delta 8 THC eo amin'ny latabatra ao amin'ny tobin-tsolika, fivarotana mora, ahi-dratsy ary fivarotana vape ary amin'ny Internet. Namidy toy ny siligaoma, vatomamy, Cartridge vape delta 8, menaka, tincture, hanina, tonon-taolana na zava-pisotro.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy fifehezana kalitao amin'ireo vokatra ireo sy ny lisitry ny singa ao aminy. Mora ihany koa ny manafangaro ireo vokatra Delta-8 ho an'ny CBD, izay tsy miteraka avo.
Delta 8 Gummies 59.99 Amidy amidy 39.99 Tsindrio eo amin'ny sary handefasana antoka famerenam-bola 14 andro.
Misy ihany koa ny tsy fahampian'ny fikarohana sy porofo momba ny fiantraikan'ny Delta-8 amin'ny fahasalamanao ankapobeny. Betsaka ny olona no nitatitra - ny ankamaroany tamin'ny alàlan'ny lahatsoratry ny media sosialy - dia mampiasa Delta-8 izy ireo miaraka amin'ny fanafody omen'izy ireo hanampiana amin'ny fahaketrahana sy ny fampiasana zava-mahadomelina. Nilaza ireo mpampiasa fa afaka koa ny Delta-8:
Mampiroborobo ny fahazotoan-komana
Mampitombo ny fahasalamana ara-tsaina
Sakano ny fandoavana mandritra ny fitsaboana homamiadana
Na izany aza, nilaza ny manam-pahaizana fa am-bava fotsiny ireo tombontsoa ireo ary tsy ampy ny fikarohana momba ny fiantraikan'izany amin'ny fahasalamanao. Ny fahafahanao mividy azy eo amin'ny talantalana dia tsy midika hoe tsy misy risika tanteraka.
Ny olona sasany dia nitatitra ny voka-dratsy toy ny:
Fihenan'ny fo miadana (bradycardia)
Fihetseham-po haingana (tachycardia)
Raha manandrana vokatra Delta-8 ianao ary mahatsikaritra ireo fihetsika ireo dia lazao avy hatrany amin'ny dokotera. Raha vonjy maika dia antsoy ny 911 na mankanesa any amin'ny hopitaly akaiky anao. Raha mihinana na tratry ny vokatra Delta-8 ny ankizy iray, toy ny siligaoma na vatomamy, dia mitadiava fitsaboana haingana.
Arakaraka. Delta-8 dia endrika THC. Matetika ny fitsapana zava-mahadomelina dia mijery ny soritry ny Delta-9, fa ny Delta-8 dia mety hiseho ho tsara amin'ny THC. Na Delta-8 na Delta-9, tsy mitovy ihany koa ny fihetsiky ny olona amin'ny cannabinoids miankina amin'ny karazana vokatra ampiasainy sy ny fotoana ampiasainy.
Amin'izao fotoana izao, ny fitsapana zava-mahadomelina fivarotana urin dia tsy manavaka ny cannabinoids isan-karazany. Ka raha manana fitsapana zava-mahadomelina ho avy ianao dia tsara kokoa ny misoroka ny vokatra Delta-8.
Fanovozan-kevitra momba ny fitsaboana WebMD
Valiny ara-pitsaboana manerana ny tranonkala momba ny CBD
navoaka voalohany tamin'ny. https://collegian.csufresno.edu/2020/10/8-common-questions-and-answers-about-cbd-and-medical-marijuana/#.YSV07vpKg2w
Miaraka amin'ny fahalasanan'ny marijuana fialamboly sy ara-pitsaboana lasa ara-dalàna any amin'ny fanjakana manerana ny firenena, mety hanontany tena ianao hoe rahoviana ary rahoviana ny fanjakanao no ho tonga. Tamin'ny resadresaka momba ny marijuana nahazo vahana be tato ho ato dia nanalefaka ny fiasan'ny olona ho any amin'ny hemp sy ny iray amin'ireo cannabinoids malaza kokoa - cannabidiol (CBD) ny olona.
Miaraka amin'ny fahabetsahan'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ary ny kolontsaina rongony manenika ny sehatra malaza, be dia be ny fanontaniana manodidina ny toerana misy rongony ao amin'ny fiarahamonina amerikana. Manohiza mamaky mba hahitana ny valin'ny fanontaniana mahazatra ananan'ny olona momba ny marijuana ara-pahasalamana sy ny vokatra CBD.
Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra mipetraka ao an-tsain'ny olona dia ny hoe "Inona ny CBD?" Ny olona tsy mahalala an'io ary mahalala fa avy amin'ny rongony dia matetika afangaro amin'ny tetrahydrocannabinol (THC), izay ilay cannabinoid mitaona olona hita marobe.
Ny fanontaniana lehibe indrindra ao an-tsain'ny olona momba izany CBD entana na hampiakatra anao ambony ve izy ireo na tsia. Ny valiny tsotra momba an'io dia tsia. Na dia cannabinoid aza izany dia tsy mampihetsi-po anao toy ny tsimparifary. Raha ny marina dia manohitra ny THC izany.
Ara-dalàna ve ny marijuana amin'ny ambaratonga federaly?
Tao anatin'izay dimy taona lasa izay dia nisy fanjakana maro izay manome alalana ny marijuana amin'ny fampiasana ara-pitsaboana sy fialamboly. Ity fiovan'ny fihetsika manoloana ny tsimparifary ity dia nanome mpankafy rongony marobe fa ny ara-dalàna dia ho ara-dalàna amin'ny ambaratonga federaly, saingy mbola tsy nitranga izany.
Na dia maro aza ny fanjakana no namela ara-dalàna ny marijuana ara-pahasalamana sy koa ny marijuana fialamboly, dia mbola tsy ara-dalàna izany eo amin'ny sehatra federaly. Noho io antony io, mpandraharaha maro any amin'ny fanjakana misy ny marijuana no ara-dalàna no tsy sahy miditra amin'ny orinasa kanna.
Inona no ataon'ny CBD?
Na dia be aza ny buzz dia mbola betsaka ny olona tsy mahalala ny tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny fampiasana CBD. Ny Cannabidiol dia ampiasaina amin'ny aretina maro toy ny fanaintainana maharitra sy aretin'andoha. Ampiasain'ny olona amin'ny menaka lohahevitra ihany koa ho an'ny psoriasis sy eczema satria manampy amin'ny fivontosana izany. Ny manam-pahaizana sasany aza mino fa mety ho fitsaboana mahomby amin'ny famoizam-po sy fitaintainanana izany.
Ahoana no fandraisanao ny vokatra CBD?
Misy fomba isan-karazany hakana an'ity famenon-tsakafo ity. Na dia tsy mahatonga anao ho ambony toa ny ahidratsy aza ny olona sasany dia misafidy ny hifoka azy ho toy ny fomba fitsaboana ny fitaintainanana. Ny fitetezana CBD dia malaza amin'ireo olona mampiasa azy io hitsaboana ny aretin-tratra sy ny fanaintainana maharitra. Ny olona sasany aza mampiasa azy io ho toy ny akora ao anaty fandrahoan-tsakafo ho solon'ny legioma sy menaka voanjo. Azonao atao ihany koa ny mahazo an'ity famenon-tsakafo ity ho toy ny tincture na salle topical.
4. Manarona ny vokatra CBD ve ny Medicare?
Fanontaniana iray mahazatra ihany koa ananan'ny olona ny hoe "Manasitrana rongony ara-pahasalamana ve ny Medicare?" Araka ny novakianao teo aloha, ny rongony dia mbola tsy ara-dalàna amin'ny ambaratonga federaly ary satria ny Medicare dia safidy fiantoham-bahoaka, tsy manarona rongony ara-pitsaboana izany.
Raha ny marina dia mety manana olana amin'ny fitadiavana mpamatsy fiantohana iray ianao izay hanonitra ny fanafody marijuana anao. Noho ny stigma manodidina ny fampiasana marijuana dia mety ho elaela vao hiditra any ireo orinasan-tsigara. Noho izany, diniho ny vidiny any am-paosy alohan'ny hampiasana marijuana ara-pahasalamana na vokatra CBD.
5. Midika inona ny marijuana ara-pahasalamana?
Na dia tsy tian'ny sasany aza ny fampiasana marijuana dia ampiasaina hanasitranana lisitry ny aretina lava, ny sasany ara-batana ary ny saina. Mampiasa izany ny dokotera hitsaboana ny schizophrenia, homamiadana, tsy fahazotoan-komana, tsy fahitan-tory, fanintona, hozatra, ary fitantanana fanaintainana.
Broad Spectrum CBD 79.99 amidy amin'ny 49.99
Ho afaka mahazo asa ve aho raha mampiasa rongony ara-pahasalamana?
Ny ahiahy lehibe ho an'ireo marary mararin'ny marijuana dia ny hiantraika amin'ny fahaizan'ny asany na tsia. Ny orinasa dia avela hitsapa izany ary hanafoana ny asa amin'ny fampiasana marijuana, na rongony marijuana aza. Raha mampiasa marijuana ara-pahasalamana ao an-trano ianao, dia ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny tsy miasa mafy mihitsy na avelao ny hampiasa marijuana.
Manana fankatoavana avy amin'ny FDA ve ny CBD?
Ny vokatra CBD dia mbola tsy notsapain'ny FDA momba ny fitsaboana aretina na aretina. Tsy midika izany fa tsy mandaitra ny CBD - midika fotsiny izany fa tsy avela hanao fitarainana ara-pitsaboana ny olona momba ny fahafahany mamantatra na mitsabo aretina. Na dia afaka mividy CBD mora foana eo ambonin'ny latabatra aza ianao dia tokony mbola manatona ny dokotera alohan'ny hampiasana izany amin'ny fanaintainana na olana ara-pitsaboana hafa.
Mahasoa ny hoditra ve ny menaka CBD?
Navoaka voalohany tao amin'ny https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-for-skin
Cannabidiol (CBD) dia fitambarana voajanahary azo avy amin'ny zavamaniry rongony. Misy porofo manamarina fa ny menaka CBD dia mety hahasoa ny fahasalaman'ny hoditra ary nampiasaina tamin'ny toe-pahasalamana isan-karazany.
Ny CBD dia singa simika ao amin'ny Cannabis sativa zavamaniry. Afaka manambatra ny CBD amin'ny menaka ny mpanamboatra, toy ny hemp na menaka voanio, hamoronana menaka CBD. Azon'ny olona atao ny mividy menaka CBD na karazana vokatra hatsarana izay mampiditra menaka CBD hampiasaina amin'ny hodiny.
Noho ny mety ho fananana manohitra ny inflammatoire, ny CBD dia mety mahasoa amin'ny fitsaboana aretina maro, toy ny mony, eczema, ary psoriasis.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny momba ny menaka CBD, ny toetran'ny hoditra mety hahasoa azy io, ary ny fomba fampiasana menaka CBD.
Ara-dalàna ve ny CBD? Ny vokatra CBD azo avy amin'ny hemp, ambany noho ny 0.3% THC, dia ara-dalàna saingy mbola tsy ara-dalàna eo ambanin'ny lalàn'ny fanjakana sasany. Ny vokatra CBD azo avy amin'ny rongony, etsy ankilany, dia tsy ara-dalàna federaly fa ara-dalàna amin'ny lalàn'ny fanjakana sasany. Zahao ny lalàna eo an-toerana, indrindra rehefa mandeha. Tadidio ihany koa fa ny Food and Drug Administration (FDA) dia tsy nankato ny vokatra CBD tsy voasoratra anarana, izay mety nasiana marika tsy marina..
CBD dia iray amin'ireo cannabinoid maro hita ao amin'ny orinasa rongony. Cannabinoid malaza iray hafa dia ny delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). THC no fitambarana tompon'andraikitra amin'ny "avo" azon'ny olona ampifandraisina amin'ny rongony. Ny CBD irery ihany dia tsy hahatonga ny olona hahatsapa ho ambony.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny CBD sy THC eto.
Ny karazana zavamaniry rongony isan-karazany dia misy ambaratonga cannabinoïde isan-karazany. Matetika, ny zavamaniry hemp dia misy CBD betsaka kokoa ary saika tsy misy THC, izany no mahatonga ny ankamaroan'ny solika CBD avy amin'ny hemp indostrialy.
Fantaro bebe kokoa ny fahasamihafana misy eo amin'ny hemp CBD sy ny rongony CBD eto.
Matetika, ny mpamokatra dia hampiasa hafanana hanangonana CBD amin'ny zavamaniry rongony ary afangaro amin'ny menaka mpitatitra hamokatra menaka CBD. Ny sasany mety mampiasa toaka mba hamoronana a Tincture CBD.
Ny menaka CBD dia misy tanjaka maro samihafa, ary azon'ny olona ampiasaina amin'ny fomba maro samihafa. Ohatra, azon'izy ireo ampiharina mivantana amin'ny hoditra izany, apetraka eo ambanin'ny lelany, na ampidirina amin'ny menaka na menaka fanosotra.
Ny vatan'olombelona dia misy tamba-jotra sarotra amin'ny neurotransmitters sy receptor cannabinoid fantatra amin'ny anarana hoe rafitra endocannabinoid receptor (ECS)Loharanom-pitokisana. Ny fikarohana dia milaza fa ny cannabinoids sy ny ECS dia mety hanana anjara toerana lehibe amin'ny fizotran'ny vatana ary misy atokisana ny hoditra Source receptor cannabinoid.
Miasa amin'ny hoditra ve izy io?
ResearchLoharanom-pitokisana manolo-kevitra fa ny menaka CBD dia mety hahasoa amin'ny toe-javatra samihafa amin'ny hoditra. Anisan'izany ireo:
Ny mony no aretina atokisana indrindra amin'ny hoditra Source amin'ny olombelona. Ny CBD dia misy fitambarana maro miaraka amin'ny fihenan'ny solika, ny anti-inflammatoire, ary ny antimicrobial izay mety hanampy amin'ny fanatsarana ny mony.
Fikarohana 2014 natokisana Source nizaha ny vokatry ny CBD amin'ny sebocytes olombelona. Ireo no sela mamorona sebum, izay waxy, menaka ateraky ny hoditra.
Raha manampy amin'ny fiarovana ny hodintsika ny sebum, ny sebum be loatra dia mety hiteraka mony ihany koa. Ny fandinihana dia manondro fa ny CBD dia afaka manakana ny sebocytes tsy hamorona sebum be loatra.
Famerenana 2016 azo itokisana Source manamarika ny mety ho fananan'ny bakteria sy antifungal an'ny zavamaniry rongony. Izany dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny mony noho ny aretina amin'ny hoditra.
Ny fandinihana iray tamin'ny taona 2019 dia manondro fa ny CBD dia mety hahasoa ihany koa amin'ny fikarakarana ny fery amin'ny mony.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny CBD sy ny mony eto.
Fahamaina sy mangidihidy
A Natoky ny fianarana 2019 Source manamarika fa ny CBD dia mety mahasoa amin'ny fitsaboana ireo soritr'aretina mahazatra amin'ny toe-piainana, toy ny fahamainana sy ny mangidihidy. Matoky ireo fananana manohitra ny inflammatoire Source ny CBD dia mety mahasoa indrindra amin'ny fampihenana ny mety ho fipoahan'ny eczema, dermatitis, ary psoriasis.
Satria ny menaka CBD dia afaka manampy amin'ny fampitoniana ny hoditra ary mampihena ny fisehoan'ny fahasosorana, dia mety ho an'ny olona manana hoditra marefo izany.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny CBD sy ny psoriasis eto.
CBD ho an'ny fahanterana sy ny kentrona
Fikarohana 2017 natokisana Source manasongadina ny fananana antioxidant an'ny CBD. Oxidative stressLoharanom-pitokisana afaka mandray anjara amin'ny fizotran'ny fahanterana. Noho izany, matoky ireo fananana manohitra ny otrikaina sy anti-inflammatoire Source ny CBD dia mety hanampy amin'ny fisorohana ny fisehoan'ny fahanterana amin'ny hoditra.
CBD fanosotra anti-fahanterana
Satria ny zavamaniry rongony dia mety misy atokisana Source fananana anti-bakteria sy antifungaly, mety mahasoa amin'ny fitsaboana aretina amin'ny hoditra izany.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny CBD sy Vokatra skincare CBD, tsidiho azafady ny ivon-toeranay manokana.
Raha ny filazan'ny World Health Organization (WHO)Loharanom-pitokisana, mandefitra tsara ny CBD amin'ny ankapobeny ny olona. Na izany aza, ny voka-dratsin'ny CBD mahazatra, izay mety miankina amin'ny doka, dia mety misy fitokisana Source:
fanovana ny fahazotoan-komana sy lanja
Tsara ihany koa ny manamarika fa ny CBD dia afaka mifandray Loharanom-pitokisana miaraka amin'ny fanafody sasany, noho izany dia zava-dehibe ny firesahan'ny dokotera fanafody amin'ny dokotera alohan'ny hampiasana vokatra CBD.
Amin'ny vokatra CBD rehetra, zava-dehibe ny fanarahana ny torolàlana momba ny marika sy ny fonosana hamaritana hoe impiry no mampiasa ny vokatra, ohatrinona no ampiasaina, ary ahoana ny fampiharana azy.
Azon'ny olona apetaka amin'ny hoditra mivantana ny menaka CBD sy ny vokatra hatsaran-tarehy misy menaka CBD.
Hahafantatra bebe kokoa momba ny lohahevitra CBD eto.
Mba haka menaka CBD am-bava dia azon'ny olona atao ny mametraka am-bava vitsivitsy ao ambanin'ny lelany, izay ahafahany mitazona ny menaka hatramin'ny 1 minitra alohan'ny hitelina azy.
Ny fatra dia tsy mitovy arakaraka ny lanjan'ny vatan'ny olona iray sy ny tanjaky ny diloilo CBD. Ny olona vaovao amin'ny CBD dia tokony hanomboka amin'ny fatra farany ambany. Raha vantany vao fantany ny fomba fihetsiky ny vatany amin'ny CBD, dia afaka mampitombo tsikelikely ny fatra.
Vakio bebe kokoa momba ny doka marina an'ny CBD eto.
Ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA)Loharanom-pitokisana tsy mifehy ny vokatra CBD amin'izao fotoana izao. Noho izany dia ampirisihinay ny olona hitady ireo vokatra solika CBD izay:
tsy misy mihoatra ny 0.3%Loharanom-pitokisana THC, isaky ny lalàna momba ny fanatsarana ny fambolenaLoharanom-pitokisana
manana porofon'ny fanandramana ataon'ny antoko fahatelo amin'ny laboratoara nahazo fankatoavana ISO / IEC 17025
mandalo fitsapana ho an'ny bibikely, metaly mavesatra, bobongolo ary mikraoba
mandalo ny tombam-bidin'ny valin'ny vokatra sy ny fitsapana fiarovana
dia tsy avy amin'ny orinasa iharan'ny taratasy fampitandremana avy amin'ny FDA atokisana Source
dia avy amin'ny orinasa iray izay manome mari-pahaizana momba ny famakafakana (COA) ho an'ny vokariny rehetra
Ho fanampin'izany, mety handinika ihany koa ny olona:
Ny herin'ny CBD
lazan'ny mpivarotra sy mpanamboatra
Fanafody hoditra voajanahary hafa
Ny fitsaboana voajanahary voajanahary izay mety hahasoa ny fahasalaman'ny hoditra na hampihena ny soritr'aretin'ny toe-batana dia:
Aloe vera dia moisturizer tena tsara ary manana toetra manohitra ny inflammato, antimicrobial, ary ny ratra. Ny fandinihana natao tamin'ny 2014 sy 2017 dia manondro fa ny aloe vera dia afaka mampihena ny soritr'aretin'ny mony sy ny psoriasis.
Famerenana 2012 azo itokisana Source manamarika fa ny tantely dia naneho toetra mampamando, manasitrana ary manohitra ny inflammatoire. Ny fanadihadihana tamin'ny 2016 dia manondro fa mety hampisondrotra ny hery fiarovan'ny vatana ihany koa, raha atokisana kosa ny 2017 Source dia manondro fa ny tantely dia afaka mitsabo ny may sy ny ratra.
Lahatsoratra 2016Loharanom-pitokisana manazava fa ny menaka voanio dia fitsaboana mahomby amin'ny hoditra maina, satria afaka manatsara be ny hydration amin'ny hoditra. Ny fanadihadiana iray tamin'ny taona 2019 dia nanamarika ihany koa fa ny menaka voanio dia afaka miaro ny hoditra amin'ny alàlan'ny fanoherana ny fivontosana sy ny fanatsarana ny fahasalaman'ny sakana amin'ny hoditra.
Menaka hazo dite
Famerenana 2013 azo itokisana Source mamaritra ny anti-milaza zavatra, mamono otrikaretina ary manasitrana ratra ny menaky ny hazo dite. Ny famerenana tamin'ny 2015 dia nanamarika fa ny menaky ny dite dia fitsaboana mahomby amin'ny mony, mampihena ny isan'ireo fery amin'ny mony amin'ny olona manana mony malefaka sy antonony.
Ny fikarohana dia manondro fa ny menaka CBD dia mety nampiasaina ho fitsaboana ny toe-pahasalaman'ny hoditra, toy ny mony, ny dermatitis ary ny psoriasis. Izany dia vokatry ny fananana anti-inflammatoire, antibacterial ary anti-oxidant.
Azon'ny olona atao ny manisy menaka CBD mivantana amin'ny hodiny, mandany azy, na mampiasa vokatra hatsaran-tarehy, toy ny menaka na menaka fanosotra, misy menaka CBD.
* Ireo fanambarana ireo dia tsy nohamarinin'ny fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina. Ireo vokatra ireo dia tsy natao hamaritana aretina, hitsaboana, hanasitranana na hisorohana aretina.
Valiny ara-pitsaboana momba ny Delta 8 THC sy Delta 10 THC Avy amin'ny Internet
Lahatsoratra avy amin'ny WEBMD, Siansa ara-pahasalamana, ary Youtube momba ny fananan'ny Delta 8 THC, Delta 10 THC, CBD, CBD ho an'ny fikolokoloana hoditra ary CBD ho an'ny biby
Emperora mena mivondrona